Iindlela ezi-7 ezinokubakho kuWhatsApp ngokulinganayo zilungile okanye zilunge ngakumbi Iindaba zeGajethi
Iindlela ezi-7 ezinokuya kuWhatsApp ezilungileyo okanye ezingcono ngokulinganayo
IiVillamandos | | ngokubanzi, WhatsApp
I-Facebook kwithuba eladlulayo yagqiba ekubeni yenze utyalomali olomeleleyo ngokuthenga WhatsApp, yiyo loo nto iba sisicelo somyalezo okhawulezileyo nelona nani likhulu labasebenzisi kwihlabathi liphela kwaye ngaphandle kwamathandabuzo sithandwa kakhulu. Kuqala khange yenze umanyano lwazo zombini izicelo, njengokucinga okanye ukuzama ukufumana isibonelelo kwinethiwekhi yoluntu edumileyo.
Nangona kunjalo, kwiiveki ezimbalwa i-WhatsApp icele ukugunyaziswa kubasebenzisi bayo ukuba babelane ngedatha ne-Facebook. Oku kangangeentsuku kuye kwaba luxanduva lokuqhubeka nokusetyenziswa kwemiyalezo kwangoko. Njengoko singayi kakhulu kwi-hoop kwaye ngaphezulu kwako konke asifuni ukuba idatha yethu yabucala yabelwane phakathi kwezicelo, namhlanje siza kukubonisa Iindlela ezi-7 kwiWhatsApp ezilungileyo ngokulinganayo okanye ezingcono kunesicelo esithandwayo.
Kunzima ukwazi ukuba lo mbandela uza kuphela njani kwaye i-WhatsApp inokulahla amakhulu amawaka wabasebenzisi ukuba ihlala izimisele ukwaba, ewe okanye ewe, idatha yabucala yabasebenzisi abane-Facebook, ngaphandle kokuchaza kakuhle into abayihambayo ukwenza nabo. Kwimeko yam, andizimiselanga kunika mvume nakubani na ukuba abelane ngedatha yam, ndingazi ukuba ndenzeni ngayo okanye ukuba izakusetyenziswa njani, ke sele ugqibe kwelokuba uqalise ukusebenzisa enye okanye ezinye iindlela zokuthumela imiyalezo kwangoko. Ukuba njengam wenze esi sigqibo, nazi ezinye iindlela ezimbalwa kuWhatsApp.
4 ukuba ama
7 I-BlackBerry Messenger
8 Izimvo ngokukhululekileyo
Enye yeendlela ezimbalwa kuWhatsApp enenkxaso yabasebenzisi, eqhubeka nokukhula ngokuhamba kwexesha, yile yocingo. Kwaye ngaba le sicelo sokuthumela imiyalezo ikwazile ukunika abasebenzisi kanye le nto bayifunayo, ngaphandle kokuzibophelela kwimicimbi engacacanga okanye engaqhelekanga.
Ukuba kuye kwafuneka sibonakale ngaphandle kweTelegram ngaphandle kwamathandabuzo ukhuseleko olunikwa umsebenzisi kunye nesantya. Ukongeza, ukubanakho ukuthumela iifoto ngaphandle kokunciphisa umgangatho wazo, izitikha okanye izipho kwaye ngaphezulu kwayo yonke into enokubakho yokuqhuba izingxoxo eziyimfihlo nabanye abasebenzisi, apho lonke ulwazi lubhalwe ngokufihliweyo kunye nokuzenzakalisa emva kwexesha esinokuthi sililawule incasa yethu.
Ukuba awukazami iTelegram okwangoku, uchitha ixesha lakho kwaye emva kokuba uyenzile, ngekhe ukhumbule ukuba yintoni i-WhatsApp okanye izibonelelo zayo.
Ngokufanelekileyo kuba i-WhatsApp iyafumaneka kwintengiso nayo umgca. Impumelelo yayo kwamanye amazwe ifana naleyo yemiyalezo ekhawulezileyo ephethwe nguFacebook, nangona kwamanye ingabonakali kwaphela.
Ngomgca singatsho njalo Olunye umdla onomdla, ujongano olwahluke kancinane, imisebenzi kunye nokukhetha, ngochukumiso lwaseAsia. Phakathi kwezibonelelo zayo kukukwazi ukwenza iifowuni zeVoIP okanye ukonwabela inkonzo ngekhompyuter ngenxa yombulelo wayo wePC.
Ngelishwa, ngaphandle kokuba iLine isinika izibonelelo kunye neempawu ezinomdla, eSpain, umzekelo, ukusetyenziswa kwayo kunqongophele, oko kuya kuthetha ukuba kubasebenzisi abaninzi ayisiyonyani yokwenyani kuWhatsApp ngaphandle kokuba baqinisekise abahlobo kunye nosapho ukuba bavumele baqala ukuyisebenzisa ngoku.
LINE: Fowuna kunye nemiyalezo
Umthuthukisi: LINE Corporation
Enye yezinto ezingasithembisiyo malunga ne-WhatsApp kukuzimela ngasese, ngakumbi kwiintsuku zamva nje ezenzayo ngedatha yethu yabucala. Ukuba inkxalabo yakho iphezulu, kunokwenzeka enye indlela Uphawu, olugunyazisiweyo nguEdward Snowden.
Phakathi kwezibonelelo ezinikezelwa sesi sicelo sokuthumela imiyalezo esikhuselekileyo kukufihla yonke imiyalezo, ukubakho kokuthintela eminye imiyalezo ngegama eligqithisiweyo okanye ukuvimba izikrini.
Ngaphandle koMqondiso nawo Ikuvumela ukuba wenze iminxeba yelizwi, njengoko kusenzeka kwezinye iinkqubo ezininzi zolu hlobo, nangona zinomdla okhethekileyo wokuba isandi sazo sibhalwe, njengayo yonke imiyalezo.
Nangona kumaxesha akutshanje uGoogle azama ukubonakala ngaphakathi kwintengiso yokhuphiswano lokufaka imiyalezo kwangoko ngeGoogle Allo, sele inesicelo esihle kakhulu solu hlobo lukhoyo namhlanje; ukuba ama.
Mhlawumbi khange sikwazi ukuqonda indlela ebekufanele ngayo ukuba le nkonzo ivela kwisigebenga sokukhangela, esisinika i ukubanakho ukuthumela nokufumana imiyalezo, kodwa kunye nokwenza iminxeba yelizwi kunye nevidiyo, kunye nomgangatho ogqwesileyo kuwo omabini la matyala. Nangona kunjalo, impumelelo yayo ibingakhange ilindelwe nangona inokusetyenziswa kuwo onke amaqonga eselfowuni kunye nakwinguqulelo yayo yedesktop.
UGoogle uzakuzama kwakhona nge Google AlloNangona mhlawumbi kufanelekile ukukhulisa ii-Hangouts kwakhona, kuba ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zilungileyo zokuthumela imiyalezo kwimarike kunye nolunye uhlobo lwenyani kuWhatsApp onamandla onke.
Enye yezona zicelo zemiyalezo yakudala kunye nezithandwayo skype, ngelishwa lakhe kule minyaka idlulileyo ilahlekile. Nangona kunjalo, namhlanje isenokuba yenye indlela enomdla kwi-WhatsApp kwaye abasebenzisi abaninzi bayayisebenzisa kubomi babo bemihla ngemihla.
Olona luvo luphambili kukuba Umgangatho omkhulu obonelelweyo xa usenza iminxeba yevidiyo, apho uninzi lubeka kubude bayo nayiphi na ifowuni eqhelekileyo, kunye nokubanakho kokuthumela kunye nokufumana imiyalezo.
Namhlanje inenani elikhulu labasebenzisi, kwinqanaba leshishini nakwinguqulelo yayo yekhompyuter, nangona ukusetyenziswa kwayo kwizixhobo eziselfowuni kukwasetyenziswa ngokubanzi.
Mhlawumbi isicelo sokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza asiqhelanga kakhulu kuwe WeChat kodwa okwangoku ingaphezulu kwe- Izigidi ezili-600 zabasebenzisi abasebenzayo kwihlabathi liphela. Kuyinyani ukuba eSpain nakwamanye amazwe amaninzi ayikaziwa ngokubanzi, kodwa ngenani elikhulu labasebenzisi elinalo, asinakuphulukana nethuba lokukufaka kolu luhlu lweendlela ezizezinye kuWhatsApp.
Ngenxa yeempawu zayo, impumelelo ingaphezulu kokuthetheleleka kwaye ifana nabanye abaninzi ikuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane imiyalezo, kodwa wenze neefowuni zevidiyo ezikumgangatho ophezulu kwaye usebenzise usetyenziso ngenye yeenguqulelo ezininzi ezikhoyo. Njengomphetho wokugqibela, iqinisekisiwe yiTrust, into exatyiswa ngabasebenzisi abaninzi.
Ixesha kumazwe amaninzi alikafiki i-WeChat, kodwa mhlawumbi izithintelo kuWhatsApp kungekudala ziya kuyenza ibe yimpumelelo kwihlabathi liphela kwaye siza kuqala ukuyisebenzisa kuyo nayiphi na ikona.
Umthuthukisi: WeChat yamazwe ngamazwe Pte. Ltd.
Ngaphambi kokuba i-WhatsApp ibekhona, abasebenzisi abaninzi bebesele benesicelo semiyalezo kwangoko kwizixhobo zethu zeBlackBerry. Njengoko uyazi ngokuqinisekileyo ukuba sithetha ngale nto I-BlackBerry Messenger ukuba kungekudala kakhulu inkonzo ibisetyenziswa ngamakhulu amawaka abantu kwihlabathi liphela. Kule mihla, ingxaki ahlala kuyo iBlackBerry kunye nobukho bayo obulinganiselweyo kwimarike ayibaleki nabani na, kodwa loo nto ayenzanga ukuba i-BBM inyamalale kubomi bethu.
Inkampani yaseCanada izamile ukukhuthaza le nkonzo, ngakumbi kunokuba yaziwa phantse ngumntu wonke, iphehlelelwe Iinguqulelo kungekuphela kwezixhobo zeBlackBerry, kodwa kunye ne-iOS kunye ne-Android apho baphumelele khona.
IBlackBerry Messenger ayisicelo somyalezo okhawulezileyo okhawulezileyo, njengoko kwenzeka kwiBlackBerry, ekholelwa ekubeni iyakwazi ukusinda kuyo yonke into okanye phantse yonke into ngaphandle kokuyila. Ngoku uzama ukuzifumana kwakhona kwaye kubonakala ngathi uyaphumelela, okwangoku inyathelo elilungileyo sele lithathiwe nge-BBM eyenye indlela eya kuWhatsApp kubasebenzisi abaninzi.
Namhlanje Zininzi iindlela onokukhetha kuzo kuWhatsApp kwintengiso kwaye yenye yezona zahluke kakhulu. Nangona kunjalo, ingxaki ayilele ekufumaneni enye into esebenza kakuhle kwaye isinike ukhetho olufanayo kunye nemisebenzi enesicelo esiku-Facebook, kodwa endaweni yokufumana apho bonke abahlobo bethu, ababaziyo okanye izalamane bakho.
Kwimeko yam yeentsuku ezidlulileyo ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyishiye i-WhatsApp, ndinosizi olukhulu kunye nostalgia, yokuya kwiTelegram. Andinasikhalazo malunga nokusebenza kweWhastApp, nangona ndingakulungelanga ukuba kuthengiswe idatha yam yabucala kunye neyabucala, njengesona sicelo sithandwayo somyalezo kwihlabathi sifuna ukwenza. Njengam, ngokuqinisekileyo baninzi abanye, abaya kuphulukana nokunxibelelana nabanye abantu, kodwa baya kuba nedatha yabo ngokukhuselekileyo.
Ukuthatha inyathelo ukusuka ku-WhatsApp ukuya kwesinye isicelo sokuthumela imiyalezo akuyoyikezi njengoko uninzi lukholelwa Kwaye kukho iindlela ezingaphezulu nangaphezulu zomgangatho ophezulu kwaye zingcono kuneWhatsApp kwaye abasebenzisi abaninzi basebenzisa imiyalezo emininzi ngaxeshanye, kancinci kancinci ezo ngxaki zokufumana abantu abathile kwinkonzo ephethwe nguFacebook.
Yeyiphi enye indlela ebalaseleyo yeWhatsApp yakho?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iindlela ezi-7 ezinokuya kuWhatsApp ezilungileyo okanye ezingcono ngokulinganayo
URodolfo Hernandez sitsho
Ndikhethe i-viber kuba apha eLatin America inabalandeli abaninzi,
Phendula uRodolfo Hernandez
Umgangatho omtsha we-USB Type-C Audio ibhengeziwe
I-Galaxy Note 7 inokhuphiswano kwaye abanye oomatshini bokuhlamba i-Samsung bayadubula ngaphandle kwesaziso sangaphambili